क्रिस्टिना रिक्कीले बुधवार Addams को रूपमा पर्दा पछाडिको भ्रमण दिन्छ - iHorror
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	क्रिस्टिना रिक्कीले बुधवार Addams को रूपमा पर्दा पछाडिको भ्रमण दिन्छ
क्रिस्टिना रिक्कीले बुधवार Addams को रूपमा पर्दा पछाडिको भ्रमण दिन्छ
by एन्थोनी Pernicka4सक्छ, 2022
by एन्थोनी Pernicka4सक्छ, 2022 14,062 हेराइहरू
सम्मानित अतिथिहरु लाई स्वागत छ
हामीले भर्खरै घोषणा गर्‍यौं क्रिस्टिना रिक्कीले चलचित्रको छायांकन गरिसकेकी छिन् आगामी मा उनको भूमिका टिम बुर्टन Netflix श्रृंखला सरल शीर्षक बुधवार। रिक्कीले हामीले धेरै मन पराउने दुःखी युवाको रूपमा उनको भूमिकालाई पुन: प्रस्तुत गर्ने छैन, तर उनले कस्तो भूमिका खेलिरहेकी छिन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन सक्छ।
हामीले गत वर्ष रिपोर्ट गरेझैं, टिम बर्टन आँखामा परेको अफवाह थियो रिक्कीले मोर्टिसियाको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्!
म नयाँ नेटफ्लिक्स शोको लागि मार्केटिङको साथमा निश्चित रूपमा प्रचारात्मक फोटोहरू हेर्न पर्खन सक्दिन। माथिको तस्बिर नयाँ शृङ्खलाको होइन तर हामीलाई रिक्की कस्तो देखिन सक्छ भन्ने बारे एक विचार दिन्छ, यदि वास्तवमा, उनी मोर्टिसियाको भूमिका खेल्दै छिन्।
क्रिस्टिना रिक्कीको एडम्सको संसारमा पुन: प्रवेश गर्ने बारे यी सबै कुराकानीले मेरो सबै उदासीन अनुभूतिहरू गुनगुनाएको छ। त्यसोभए जब म एक जवान रिक्कीको यो 1993 क्लिपमा दौडें जुन हामीलाई एडम्स परिवारको हवेलीको भ्रमण दिँदै थिए, मैले साझा गर्नुपर्‍यो।
ET ले 1993 मा 'Addams Family Values' को सेटको भ्रमण गर्यो र क्रिस्टिना रिक्कीले बुधवार एडम्सको रूपमा चरित्रमा पर्दा पछाडिको भ्रमण दिनुभयो! रिक्कीले हामीलाई Addams Mansion भित्र लैजान्छिन्, र उनी र Pugsly सामान्यतया समस्यामा पर्न सक्ने ठाउँमा औंल्याउँछिन्।
बुकमार्क iHorror.com हामी निश्चित रूपमा यस परियोजनामा ​​​​हामीले प्राप्त गर्ने कुनै पनि नयाँ जानकारी पोस्ट गर्नेछौं!